> Resource> Mac> otú nyefee iPhone Igwefoto Roll ka Mac
Ị iPhone Igwefoto Roll jupụtara photos, onwe elu ohere ma ọ bụ dezie foto na Mac, chọrọ nyefee iPhone Igwefoto Roll ka Mac? Na nke a, ka mmekọrịta iPhone Igwefoto Roll ka Mac rụọ ọrụ nke ọma na ngwa ngwa, m na-atụ aro ị na-agbalị ihe iPhone ngwa - Wondershare TunesGo (Mac). Ọ na-ahapụ ị na-ele na idetuo iPhone Igwefoto Roll ka Mac anya na-adị mfe. Naanị na 3 nzọụkwụ, ị ga-ahụ na ị na-agafere foto na iPhone Igwefoto Roll ka Mac.
Nzọụkwụ 1. Download iPhone Igwefoto Roll ka Mac transfer ngwá ọrụ
Download TunesGo (Mac) omume echichi faịlụ na wụnye ya na gị Mac. Ọ na-arụ ọrụ nke ọma na MacBook Aird / MacBook Pro / iMac na-agba ọsọ Mac OS X 10.6, 10.7, 10,8, 10,9, 10.10 na 10,11. Wondershare TunesGo Windows version dị ka nke ọma. Ị nwere ike na-agbalị Windows version na gị Windows PC.
Nzọụkwụ 2. Jikọọ Mac na iPhone
Jiri gị iPhone eriri USB jikọọ Mac na iPhone. Ẹkedori TunesGo (Mac) ngwá ọrụ na ya ga-ahụ gị iPhone ozugbo. Iji mụtakwuo Ama banyere akwado iPhone, biko pịa ebe a.
Nzọụkwụ 3. Nyefee iPhone Igwefoto Roll ka Mac na ogbe
Pịa "Photos" na n'aka ekpe nke isi window. Ekem, ke ọhụrụ window, ị ga-ahụ na niile foto na vidiyo na igwefoto Roll bụ ebe a. Họrọ chọrọ foto na vidiyo na ogbe na pịa "Export" n'elu nke mpio. Na popped elu mkparịta ụka igbe, setịpụrụ a ebe na gị Mac na kọmputa na-zọpụta ndị a foto na vidiyo na ị na-ebufe si iPhone Igwefoto Roll ka Mac.
All usoro nke-ebufe iPhone Igwefoto Roll ka Mac ga-okokụre na a abụọ. Mgbe ahụ ị ga-ahụ na vidio ndị a na foto site na iPhone Igwefoto Roll na gị Mac. Mgbe e mesịrị, i nwere ike ịkọrọ foto na gị onwe onye weebụsaịtị ma ọ bụ ewu foto slides. Gịnị bụ ihe ịtụnanya banyere Wondershare TunesGo (Mac) bụ na ọ na-enye gị nyefee music na vidiyo si iPhone ka Mac dị ka mma. Na nke a kemfe iPhone ngwa, ị ga-zuru akara gị iPhone faịlụ conveniently.
Gbalịa Wondershare TunesGo (Mac) ugbu a nyefee iPhone Igwefoto Roll ka Mac!
Na-ekiri ndị Video nyefee Photos si iPhone Igwefoto Roll ka a Mac
Olee otú iyi Video si Mac ka TV iji Xbox One